Weli dhaawacaysa kasta marnaba si ay u gudbiyaan xiriirada ka LG si iPhone? Tan iyo markii ay kaararka SIM kala duwan yihiin tirada, ma ahan oo keliya in aad is gelin kara kaadhka LG SIM on iPhone si aad u hesho xiriirada ku yaal. Fikirka ugu horeeya ee aad gali kartaa xiriir telefoonka LG xisaab qaar ka mid ah, sida Gmail, markaas, u hagaagsan xisaabta la iPhone, waxa ay qaadataa wakhti sida oo ma ahan ammaan ah.
In qorbaha this, heer sare ah oo aad soo jeediyay in la isticmaalo qalab kala iibsiga phone xirfadda aad ka caawinaya. Waxa loo magacaabay Wondershare MobileTrans ama Wondershare MobileTrans u Mac , la siiyo fursad ay ku wareejiso xiriirada LG si iPhone 1 click aad. Waxa aanu kaliya ma wareejiyo lambarka taleefanka, laakiin nuqul cinwaanka email, magaca shirkadda, cinwaanka guriga, iyo in ka badan info xiriirada si aad iPhone.
Sidee si ay u gudbiyaan xiriirada ka phone LG si iPhone
Download this hal-click qalab kala iibsiga phone kombiyuutarka. Markaas, Hubi hage tallaabo-tallaabo hoos ku qoran in la ogaado howlgalka. Halkan, Aynu qaadan version Windows sida isku day ah.
Wondershare MobileTrans - 1-Guji LG in Transfer iPhone
Fiiro gaar ah: MobileTrans taageertaa badan oo qalabka LG Android, iPhone, oo ay ku jiraan iPhone 6S Plus, iPhone 6S, iPhone 6, iPhone 5 oo dheeraad ah oo ay ku macruufka 9 / 8/6/5/7. Hubi halkan si aad u hesho macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan qalabka sida mobiilka iPhone LG taageeray.
Tallaabada 1. Orod qalab kala iibsiga phone kombiyuutarka
Si aad u billowdo leh, rakibi qalab kala iibsiga telefoonka - MobileTrans kombuutarka. Waxaa rakib si ay u muujiyaan suuqa kala hoose shaashadda PC. Dooro Phone in hab Transfer Phone.
Tallaabada 2. Isku qalab LG iyo iPhone in uu kombuutarka
Markaas, labada aad telefoon LG iyo iPhone xidhmaan computer Windows iyadoo labo USB fiilooyinka. Tani qalab kala iibsiga phone si deg deg ah Aqoonsanaysaan, labada telefoonada. Markaas, aad telefoon LG waxaa soo bandhigay sida "Source Phone" bidixda, oo aad iPhone, ee "Phone Destination" on xaq.
Marka gujinaya "Flip" dhexeeya telefoonada ah, waxaad bedeli kartaa meelaha ay si ay u gudbiyaan xiriirada, videos, fariimaha qoraalka ah, sawirada iyo music ka iPhone in LG telefoonka ama kiniin.
Fiiro gaar ah: Sax "data Clear hor nuqul", iyo xiriirrada hadda ku iPhone laga saari doono si loo badbaadiyo xiriirada ka LG telefoonka ama kiniin. Marka aad rabto in lagu wareejiyo xiriirada in xisaabaadka si iPhone, waxaad u baahan tahay inaad gasho xisaab ku saabsan telefoonka LG ka hor inta suuqa kala iibsiga xiriir ah.
Tallaabada 3. xiriirada ka dhaqaaq LG si iPhone
By default, taas phone qalab kala iibsiga awood aad ay u guuraan music, videos, fariimaha qoraalka ah, xiriirada, jadwalka iyo sawiro ka LG telefoonka ama kiniin si iPhone waqti. Si aad u dhaqaaqo xiriirada, waa in aad uncheck qoraalka fariimaha, muusig iyo sawiro.
Markaas, adigoo gujinaya "Start Copy", taas phone qalab kala iibsiga ka bilaabi ka LG wareejinta xiriirada si iPhone. Ka dib markii dhammaan xiriirada on LG wareejiyo iPhone, kaliya aad u baahan tahay inaad guji "OK" dhammayn kala iibsiga xiriir ah.
Daawo video ku dayanayaan inay iPhone xiriirada LG
Isku day MobileTrans si ay u gudbiyaan xiriirada ka LG si iPhone 1 click!
> Resource > iPhone > Sidee si ay u gudbiyaan Xiriirada ka LG si iPhone